गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न फेरि विदेशी कम्पनीको खोजी!
उत्तम काप्री बिहीबार, माघ १, २०७७, ०९:११
काठमाडौं- भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले पुनः विदेशी कम्पनीको खोज्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसअघि विदेशी कम्पनी भित्र्याउन गरिएका सबै प्रक्रिया रद्द गरेको सरकारले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट ग्लोबल टेन्डर गरी विदेशी कम्पनी खोज्ने तयारी अघि बढाएको हो।
प्रक्रिया रद्द भएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्म विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने र क्रमशः टेन्डर प्रक्रियाबाट नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने गरी छलफल सुरु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए।
यसअघि विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा जर्मनीको ‘म्युनिख’ विमानस्थललाई दिन अगाडि बढाएका सबै प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार सञ्चालन गरेर फाइदामा लैजान नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ‘जिटुजी’मोडलमा चलाउने निर्णय गरेर पनि पछि हटेको थियो। जर्मनीको म्युनिखलाई ३० वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी अगाडि बढाइएको प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
‘सुरुवाती चरणमा विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन नै गर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘भावी दिनका लागि भने टेन्डरबाट नयाँ कम्पनी छनोट गरेर विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने विषयमा अहिले छलफल सुरु भएको छ। तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।’
पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिमा म्युनिखलाई दिने विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकार पछि हटेको थियो।
समितिमा गैरसैनिक हवाई उड्डयन ऐन २०५३ मा विमानस्थल, निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हुने उल्लेख गरिएकोले पनि सिधै कम्पनीलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समितिमा हुन सकेको थिएन।
त्यसबेला विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी अघि बढेको सरकार बीचमा प्रक्रिया रद्द गर्ने र पुनः विदेशी कम्पनी खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो।
अहिले सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै कम्पनीको छनोट गर्ने विषय अगाडि बढाइएको छ। सरकारकै आग्रहमा म्युनिखले २०७६ कात्तिकमा ३० वर्षका लागि विमानस्थल सञ्चालनका लागि विस्तृत प्रस्ताव पठाएको थियो। सरकारले सोही प्रस्तावको आधारमा दुईपक्षीय छलफललाई तीव्रता समेत दिइएको थियो। तर, विरोध भएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गरेर प्राधिकरणले नै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।
गौतम बुद्ध विमानस्थल प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने भएसँगै नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमानस्थलको ग्राउन्डह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय भइसकेको छ। निगमले भने सोही निर्णयको आधारमा विमानस्थल सञ्चालनको पूर्वाधार तयारीमा जुटिसकेको बताएको छ।
विमानस्थल संचलनका लागि म्युनिखले २०७५ माघमा नेपाललाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो। गत साउन पहिलो साता नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र लेख्दै भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा दिन आग्रह सहितको पत्र पनि पठाएको थियो। सोही आधारण्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइएको थियो। पछि एकाएक सरकार पछि हटेको थियो।
अन्तिम चरणमा निर्माण ठप्प!
भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि निर्माण सम्पन्न हुने मितिबार भने अन्योल देखिएको छ। अन्तिम पटक थप भएको भनिएको समय पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै सकिएको छ।
सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै २०२० को डिसेम्बरसम्मको समय थप गरेको थियो। तर, तोकिएको समयमा पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले प्राविधिक दक्ष जनशक्ति नेपाल ल्याएर उपकरण जडानको काम नगर्दा थप समयमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
निर्माण कम्पनीले कोरोनाको कारण देखाउँदै प्राविधिक दक्ष कामदार ल्याउन नसक्दा टर्मिनल भवनको उकरण जडान र एसी जडानको काम हुन सकेका छैनन्।
चिनियाँ कम्पनीले ५ महिनादेखि प्राविधिक कर्मचारी आउँदैछन् भनेर आलटल गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक कम्पनीले नेपाल आइपुगेका कामदारमा कोरोना देखिएको र उनीहरू विमानस्थलको क्वारेन्टाइनमा रहेको भन्दै आएको छ। सोहीकारण विमानस्थल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ।
यतिबेला ३५ जना प्राविधिक ल्याएर उपकरण जडान गर्नुपर्ने अवस्थामा काम रोकिएको छ। तर, उपकरण भने सबै निर्माणस्थलमा आइसकेका छन्। विमानस्थलमा नेपालमा रहेका केही चिनियाँ प्राविधिक र नेपाली प्राविधिकै भरमा रन-वे लाइट, ब्यागेज ह्यान्डलिङ र कन्भर बेल्टको उपकरण जडानको काम भने भइरहेको छ। तर, आवश्यक दक्ष प्राविधिक कामदार चीनबाट नआउँदा 'आइसिबी जिरो वान'अन्तर्गत रहेको एसी र टर्मिनल भवनको उपकरणको काम रोकिएको आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारी बताउँछन्। यो काम दक्ष जनशक्ति नेपाल आएर जडान थाल्दा पनि न्यूनतम २ देखि ३ महिनासम्म लाग्ने हुन्छ। प्राविधिक कामदार नआउँदा समय कति थप्ने विषयमा समेत निर्णय हुन सकेको छैन।
यसैगरी, 'आइसिबी जिरो टु'अन्तर्गतको सर्भिलेन्स जडानको काम पनि प्राविधिक कामदारको अभावका कारण रोकिएको छ। यो अन्तर्गतका काम गर्ने कामदार भने अमेरिका र अष्ट्रियाबाट आउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू पनि नेपाल नआउँदा काम रोकिएको आइसिबी जिरो टु आयोजनाका प्रमुख प्रविन न्यौपाने बताउँछन्। आइसिबी जिरो टुको काम सक्न पनि ३ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ। तर, कामदार नआउँदा समस्या सिर्जना भएको उनको तर्क छ।
यो आयोजना सन् २०१५ मा सुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा उक्त अवधिभित्र नसकिएपछि संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ३१ मार्च २०२० मा सम्पन्न हुनु पर्ने थियो। उक्त समय सीमा पनि सकिएको छ। अब पुनः समय थप गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यो आयोजनाको कुल लागत ३० अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमार्फत् दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण थालिएको थियो। विमानस्थलको रनवे ३ हजार मिटरको हुनेछ। साथै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार भवनलगायत सञ्चार तथा पथ प्रदर्शक सामग्री जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य सरकारको छ।
दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजनाअन्तर्गत रहेको यो विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंक एडिबीको सहयोग छ। यो परियोजना कूल ८५.५५७ मिलियन डलरको हो। प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग आइसिबी–१ का लागि ७८.३ मिलियन डलरमा सन् २०१४ नोभेम्बर १३ मा सम्झौता गरेको थियो।